नेपाल बायुसेवा निगमले विदेशी पाइलटलार्इ १६ लाख तलब, नेपालीलार्इ २ लाख ! – ZoomNP
नेपाल बायुसेवा निगमले विदेशी पाइलटलार्इ १६ लाख तलब, नेपालीलार्इ २ लाख ! प्रकाशित मिति: बिहिवार, आश्विन १३, २०७३ समय - ८:२५:०४ असोज १३ राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल बायुसेवा निगमका साना जहाज उडाउने पाइलटले महिनामा मुश्किलले २ लाख रूपैयाँसम्म पारिश्रमिक हात पार्छन्। निजी वायुसेवाका पाइलटले त्यसको दोब्बरभन्दा बढी पाउँछन्।
सधै तलबभत्ता कम भयो भन्ने गुनासो गर्दै आएका निगमका पाइलटलाई अर्को आरिसलाग्दो खबर छ- निगमकै चिनियाँ जहाज उडाउन आएका एक विदेशी पाइलटले मासिक १६ लाख रूपैयाँ तलब खान थालेका छन्। यो खबर सेतोपाटीका लागि आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
उनका अनुसार प्रशिक्षक पाइलट पेनिटाले जहाज कमान्ड गर्दै तीन महिना निगमका को–पाइलटलाई निश्चित घन्टा उडाउँछन् र स्तरोन्नति गरी क्याप्टेन बनाउने छन् । त्यसपछि ती क्याप्टेनले जहाज कमान्ड गर्न पाउँछन् । सुरुआतमा यो जहाजबाट दैनिक तीन उडान गर्ने तालिका बनाइएको छ ।